Updated News in Nepali from all over the world at : http://nepali.reaknlinks.com. के विवाहपछि प्रेम मर्छ ? (भिडियाे सहित)
के विवाहपछि प्रेम मर्छ ? (भिडियाे सहित)
केही अगाडि भृकुटी मण्डपमा हामी साथीहरु चियामा गफिरहेको बेला एकजना साहित्यकारले आफ्नो प्रेमिकाको खुव तारिफ गरे। ५० वर्षका ती साहित्यकारको कुरा सुन्दा हाँसो पनि लाग्यो। फ्याँट्ट भनिहाले, ‘हैन् हो, बिहे भएको मान्छेले के साह्रो प्रेमिकाको कुरा गरेको।’
उनले पुलुक्क मेरो मुख हेरे। र, जवाफ फर्काइ हाले, ‘के कुरा गर्नु भएको, बिहे गरेको मान्छेलाई माया चाहिदैंन कि क्या हो?
मैले प्रतिवाद गरे, ‘बिहे गरेपछि श्रीमती नै तपाईको माया हो।’
मेरो उत्तर सायद उनलाई मन परेन होला। निधार खुम्च्याउँदै अलि कडा स्वरमा भने–‘के भन्दै हुनुहुन्छ तपाई ?’
उनले थपे, ‘बिहे गरेपछि प्रेम मर्छ। अनि कसरी प्रेमिका र श्रीमती एकै हुन सक्छन्?’
उनको कुरा सुनेर एकछिन त म अलमलमा परे।
खम्बामा ठोक्किएर र खाल्डोमा परेर लागेका घाउले हाम्रो शरीर कहाँ सग्लो छ र? (भिडियो सहित)
‘के साच्ची नै विवाह गरेपछि प्रेम मर्छ त?’
ती साहित्यकारको भनाईले मलाई रनभूल्लमा पार्यो।
म सोच्न बाध्य भए।
‘के पछिल्लो समय बढ्दै गएको सम्वन्ध विच्छेदका घटना यसैको उपज हो त?’
विवाहको शास्त्रीय व्यख्याले भन्छ– पुरुषको हिंस्रकपनालाई शान्त पार्न विवाहको उत्पत्ति भएको हो।
तर, समाजशास्त्रीको मत भने फरक पाइन्छ। उनीहरू विवाहको उत्पत्ति मानव सभ्यताको उत्पत्ति सँगै जोडिएको बताउँछन्।
घुमन्ते युगमा मानिसहरू समूह बनाएर बस्थे। समूहमै शारीरिक सम्वन्ध बनाउँथे। त्यो बेला श्रीमती मेरो र तेरो हुँदैन्थ्यो।
कृषि युगको सुरुवात सँगै परिवार र निजी सम्पति राख्ने चलन बढ्यो। मानवजातीको विकाशसँगै कालान्तरमा विवाह गर्ने परिपाटीको सुरुवात भयो।
मानव सभ्यताको इतिहास कोट्याउने हो भने विवाह हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग भएको ८ हजार वर्ष मात्र भएको देखिन्छ।
तर, सम्बन्ध विच्छेदको घटना उति पुरानो होइन।
तरपनि पछिल्लो समय नेपालमा सम्वन्ध विच्छेदका घटना व्यापक रूपमा बढेको पाइन्छ।
भनिन्छ– जीवनमा शोक, पराजय, भ्रम र क्रोधभन्दा धेरै माथि हुन्छ, प्रेम। स्वतन्त्र आत्माको भावनाको भाषा हो प्रेम। तर कहिले काही यो भावना स्थायी नहुन पनि सक्छ।
विवाहित जोडीलाई शुभकामना दिँदै भन्ने गरिन्छ, वैवाहिक बन्धनमा बाधिनु भएकोमा बधाई छ।
कञ्चनपुरकी अर्की बलात्कृत निर्मला अपहरणमाः स्लिप-किक हान्दै बचाइन् ज्यान (भिडियो)
केही वर्ष अघिसम्म विवाहलाई बन्धनको रुपमा हेरिन्थ्यो। यसमा एकपल्ट बाँधिएपछि त्यसलाई तोड्नु हुदैन भन्ने बलियो मान्यता थियो।
अहिले विवाह वन्धन हैन, सम्वन्ध भएको छ। यो सम्वन्ध एक–आपसको असमझदारीमा कुनै पनि बेला तोडिन सक्छ।
विवाहपछि श्रीमान वा श्रीमती मेरै कब्जामा बस्नुपर्छ। मैले भनेका हरेक कुरा मान्नुपर्छ। मेरो रोजाई र चाहनाअनुसार मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच नेपाली समाजमा हावी छ।
नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्पराले पनि श्रीमानलाई पति अर्थात देवताको रुप मानेको छ। नारी जातिलाई पुरुषहरूलाई पुज्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ।
विवाहपछि महिलाले घरलाई रिझाएर राख्नुपर्छ। परिवारले भनेको सबैकुरा मान्नुपर्छ र उनीहरुकै निर्देशनमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण महिलाहरू समझदारी भन्दापनि बन्धनभित्र बाँधिएर बाँचिरहेका थिए।
तर अब विस्तारै समय फेरिएको छ। महिला वा पुरुष दुवैजनाले विवाहलाई समझदारीका साथ अगाडि बढाउन पनि सक्छन्। ईच्छा नलागे सम्वन्ध तोड्न पनि सक्छन्।
जो कोही अहिले स्वतन्त्र रुपले बाँच्न चाहन्छ। श्रीमान वा श्रीमती भन्दैमा आवश्यकताभन्दा बढि नियन्त्रण, साना कुरामा हुने किचकिच, शंका उपशंकाले गर्दा सात जन्म नछुट्टिने वाचा–कसम खाएको जोडी पनि छुट्टिन सक्छ।
किन बढ्दै छ कतारमा विप्लव माओवादीको आकर्षण? (भिडियो सहित)
समाजशास्त्री प्रकाश पौडेल विवाहपछि प्रेम मर्छ नै भन्ने कुरामा पूर्णरुपमा सहमत छैनन्। उनी सबै प्रेम विवाहमा परिणत नहुन पनि सक्ने बताउँछन्। र, विवाहपछि प्रेम जीवनको सुरुवात हुन सक्ने पनि औल्याउँछन्।
व्यस्त जीवनशैली, उत्पादनमा आएको परिवर्तन, फराकिलो ज्ञानको परिधी, एक–अर्काप्रति बढ्दो असमझदारी, महिलामा चेतनाको विकास, आर्थिक स्रोतमा पहुँच र नियन्त्रण, महिलाले आफ्नो पहिचानको खोजी गर्नु आदि कारणले सम्वन्ध विच्छेदका घटना बढेको उनको भनाई छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता बढ्नु तथा पुरुषहरू वैदेशीक रोजगारीमा जाँदा जैविक आवश्यकता पुरा गर्न जोडिएका सम्बन्धले गर्दा पनि विच्छेदको घटना बढ्दै गएको छ,’ समाजशास्त्री प्रकाश पौडेल बताउँछन्।
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार वैदेशीक रोजगारमा गएका ८ हजार ९ सय ३३ परिवार मध्ये ३६ प्रतिशत श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेका छन्। वैदेशीक रोजगारीमा गएका महिलामध्ये २ प्रतिशतको मात्र दोस्रो विवाह भएको छ।
सम्वन्ध विच्छेदको यो तथ्यांकले विवाहपछि प्रेम मर्दै जान्छ भन्ने ती साहित्यकारको विचारलाई चित्रण गरेको देखिन्छ।
घरमा श्रीमती राखेर खुलेआम प्रेमिकाको प्रशंसा गर्नु पुरुषको लागि सहज होला। तर, महिलाको लागि त्यो समाजिक बहिस्कारको विषय हुन जान्छ। तसर्थ विवाह पछि प्रेमलाई जिवित राख्न आफ्नो तर्फवाट के गर्न सकिन्छ भनेर श्रीमान श्रीमति दुबैले आजै देखि एक–अर्काको कदर गर्दै विश्वासको वातावरण कायम राख्न के गर्न सकिन्छ?
यसतर्फ चिन्तन गर्ने हो कि?
संगीत घरका मालिक रमण (भिडियो रिपोर्ट)
गैरसैनिकलाई ‘कम्ब्याक्ट’ पोशाक निषेध